Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Kanada dia nanambara ny fanitarana ny fandrarana ny sidina avy any India
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Rehefa miomana amin'ny fiverenan'ireo sidina mivantana avy any India mankany Canada i Canada, ny Transport Canada dia manambara ny fanitarana ny Notice to Airmen (NOTAM) izay mametra ny sidina mivantana rehetra momba ny sidina sy ny mpandeha mivantana mankany Canada avy any India hatramin'ny 26 septambra 2021, amin'ny 23: 59 EDT.
Rehefa miomana amin'ny fiverenan'ireo sidina mivantana avy any India mankany Canada i Canada, dia manambara ny fanitarana ny Notice to Airmen (NOTAM) mametra ny sidina mankany Canada avy any India ny Transport Canada.
Ny olona rehetra any Canada dia notoroana hevitra mba hisorohana ny dia lavitra tsy ilaina any ivelan'i Kanada - ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia mampitombo ny loza mety hitranga, ary ny fiparitahan'ny COVID-19, ao anatin'izany ny aretina ateraky ny fiovana vaovao.
Ny fepetra momba ny sisin-tany sy ny fahasalamam-bahoaka dia miova ihany koa rehefa mivoatra ny toe-javatra epidemiolojika.
Kanada dia manohy mandray fomba mifototra amin'ny risika sy refesina amin'ny fanokafana indray ny sisin-tany raha manao laharam-pahamehana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olona rehetra any Canada.
Rehefa miomana amin'ny fiverenan'ireo sidina mivantana avy any India mankany Canada i Canada, Fitaterana Canada dia manambara ny fanitarana ny Notice to Airmen (NOTAM) izay mametra ny sidina mivantana rehetra momba ny sidina sy ny mpandeha mivantana mankany Canada avy any India hatramin'ny 26 septambra 2021, amin'ny 23:59 EDT.
Raha vantany vao tapitra ny fameperana amin'ny sidina mivantana, dia afaka miakatra sidina mivantana avy any India mankany Kanada miaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Ireo mpandeha dia tsy maintsy manana porofon'ny fitsapana molekiola COVID-19 ratsy avy amin'ny nekena Laboratoara genestrings tao amin'ny seranam-piaramanidina Delhi nidina tao anatin'ny 18 ora taorian'ny nandaozany ny sidina mivantana tany Canada.
Alohan'ny hidirany dia hijery ny valin'ny fitsapana nataon'ny mpitsidika ireo mpandraharaha an'habakabaka hahazoana antoka fa mendrika ny ho tonga any Kanada izy ireo ary ireo mpandeha vita vaksiny feno dia nampakatra ny mombamomba azy ireo tao amin'ny fampiharana finday na tranokala ArriveCAN. Ireo mpitsangatsangana izay tsy mahatratra ireo fepetra takiana ireo dia holavina tsy hiditra.
Ho dingana voalohany, ny 22 septambra 2021, sidina mivantana telo avy any India no ho tonga any Canada ary ny mpandeha rehetra amin'ireo sidina ireo dia hosedraina COVID-19 rehefa tonga mba hahazoana antoka fa mandeha ireo fepetra vaovao.
Aorian'ny fiverenan'ny sidina mivantana, ireo mpandeha izay afaka miditra any Canada izay miala an'i India Kanada amin'ny alàlan'ny làlana ankolaka iray dia hotakiana hatrany ny fahazoana, ao anatin'ny 72 ora fiainganana, fitsapana molekiola COVID-19 tsy mandeha amin'ny laoniny avy amin'ny firenena fahatelo - ankoatran'i India - alohan'ny hanohizany ny diany mankany Canada.
Ny olona rehetra any Canada dia notoroana hevitra mba hisorohana ny dia lavitra tsy ilaina any ivelan'i Kanada - ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia mampitombo ny loza mety hitranga, ary ny fiparitahan'ny COVID-19, ao anatin'izany ny aretina ateraky ny fiovana vaovao. Ny fepetra momba ny sisin-tany sy ny fahasalamam-bahoaka dia mbola miova ihany koa rehefa mivoatra ny toe-javatra epidemiolojika.